Roandà: Mametraha Fanontaniana Amin’ny Filoha Roande Ao Amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2011 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Italiano, Español, English
Ny 5 May 2011, ny Filoha Roande Paul Kagame no mpitarika Afrikana voalohany indrindra hohadihadihana ao amin'ny YouTube World View. Ny World View dia andianà fanadihadiana isam-bolana iarahana amin'ireo mpitarika manana toerana lehibe indrindra eran-tany, izay hametrahanao ireo fanontaniana. Ireo fanontaniana be mpifidy indrindra no hapetraka mandritra ireo fanadihadiana.
Miteny ny bilaogy ofisialin'ny Youtube:
Araka ny nambaran”i Ory Okolloh ny Mpiandraikitra ny Politika Afrika sy ny fifandraisana amin'ny governemanta, ary ny Mpiandraikitra ny YouTube Vaovao sy Politika, Ramya Raghavan, hiresadresaka anatinà fanadihadiana manokana miaraka amin'i Khaya Dlanga, mpiara-miasa amin'ny YouTube sy iray amin'ireo mpitoraka bilaogy sangany any Afrika Atsimo, i Kagame. Mandritra ny fanadihadiana, hamaly sasantsasany amin'ireo fanontaniana malaza indrindra napetrakareo ny Filoha Kagame.
Afaka mametraka fanontaniana ny tsirairay. Ny fe-potoana farany handefasana ny fanontanianao dia ny 3 May ary ny fanadihadiana farany dia ho hita ny 7 May:
Ny tenifototry ny Twitter amin'ity fanadihadiana ity dia #askkagame.
Nampitolagaga ireo mpitoraka tweet i Paul Kagame tamin'ny Martsa teo rehefa nanaiky fanasana nalefan'ilay mpitoraka bilaogy Keniana ho azy avy amin'ny Twitter.